Cây Xấu Hổ (mắc Cỡ, Trinh Nữ) – Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Xấu Hổ | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Cây Xấu Hổ (mắc Cỡ, Trinh Nữ) – Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Xấu Hổ | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Cây Xấu Hổ (mắc Cỡ, Trinh Nữ) – Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Xấu Hổ | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Shame Tree ekwaziwa ngokuba (i-squishy okanye intombi enyulu) sisityalo esikhula rhoqo kusapho lwembotyi, igama lenzululwazi ngu. I-Mimosa pudica L, umthi unamanye amagama amaninzi afana nala: isivakalisi esinyulu, umthi wentloni, umsebenzi we-tau. Umthi wehlazo uvela kwimimandla yaseMzantsi Melika naseMbindi Melika, ngoko ke zivela kwamanye amazwe aseAsia njenge: Thailand, Indonesia, Philippines, Vietnam. Ngo-2014, oososayensi baye bafumanisa ukuba izityalo ezihlazekileyo ziyakwazi ukukhumbula iziganeko ezenzeke njengezilwanyana.
1 Yintoni umthi weentloni?
2 Iimpawu zesityalo sehlazo
2.1 Iimpawu zeShame Tree Shape
2.2 Iintloni zomthi iimpawu eziphilayo
2.2.1 Ukusabalalisa: Isityalo sehlazo sivela eMzantsi Melika nakuMbindi Melika. Ehlabathini, isityalo sikwasasazwa kumazwe athile aseAsia anjengeVietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Jamaica…
3 Ukusetyenziswa kwesityalo sehlazo
4 Indlela yokutyala kunye nokunyamekela isityalo sehlazo
5 Indlela yokunyamekela isityalo sehlazo
6 Ulawulo lwezinambuzane kwizityalo
7 Ividiyo yomthi wehlazo (intombi) ikhusela amathambo kunye namalungu
8 Umphumo wokuphilisa wesityalo sehlazo
8.1 Indlela yokusebenzisa isityalo sehlazo ukunyanga ukulala
8.2 Isityalo sehlazo siphatha intlungu yethambo, i-disc ye-herniated
8.3 Ezinye ezininzi zokusetyenziswa
9 Qaphela xa usebenzisa isityalo sehlazo ukunyanga izifo
Yintoni umthi weentloni?
Ihlazo sisityalo samayeza esikhula endle kumaphondo amaninzi nakwizixeko kwilizwe lonke. Njengesityalo esiqhelekileyo, isityalo sehlazo (iintloni) sineempembelelo ezininzi ezixabisekileyo kwaye zixabiseke ngokwezonyango.
Ngokuqinisekileyo wonk’ ubani ukhe wanyathela iliva eneentloni, ngoko mhlawumbi asiqhelananga kakhulu nesi sityalo sasendle. Isivakalisi sehlazo sikwabizwa ngokuba: Umthi wehlazo, umthi wobuntombi, umthi wehlazo, kunye nomsebenzi we-tutu. Umthi ubizwa ngokuba yintloni kuba, xa sichukumisa amagqabi, uya kushwabana okwentombazana eneentloni.
Igama leNzululwazi: IMimosa pudica L. Yeyosapho iMimosaceae.
Inkcazo yemilo: Sisirhubuluzi somhlaba, isiqu sinameva abukhali, amagqabi anoburharha, iintyatyambo zimfusa. (Jonga ifoto ukujonga ngcono).
Indawo yokusasaza: Umthi ukhula endle kuyo yonke indawo, eMzantsi ukhula kakhulu (Akukho mntu wakhe wawutyala).
Ukuvuna kunye nokusebenza: Ngokwamayeza esintu, isityalo sentloni liyeza elixabisekileyo. Isityalo sonke, kuquka amagqabi, iziqu kunye neengcambu, sisetyenziselwa amayeza. Xa kuvunwa, abantu bayasincothula isityalo baze basizise ekhaya, basihlambe, basike basomise njengeyeza (isiqu kunye neengcambu zomiswa ngokwahlukeneyo).
Ukwenziwa kweekhemikhali: Amagqabi aqukethe izithako ezisebenzayo: i-mimosin kunye ne-seen.
Iimpawu zesityalo sehlazo
Iimpawu zeShame Tree Shape
Iintloni zezodidi lwezityalo ezizizityalo ezimele izityalo ezincinci, okanye ezinezityalo ezisele zikhulile ezihlala zirhubuluza. Umthi unobude obungange 1 – 1.5m, uhlala urhubuluza okanye ungqiyame kufutshane nomhlaba, isiqu esirhubuluza phantsi sikholisa ukuba ngqindilili kunesiqu esinyukayo, kwixolo kukho iicuticles ezininzi. Amagqabi ngamagqabi adityanisiweyo, amile okwentsiba, i-petioles eziphambili zihlala zine-cuticle-like spines, amagqabi anamagqabi amalunga nama-2 esibini, igqabi ngalinye linamaphetshana angama-10-15 aphikisanayo. Iintyatyambo zehlazo zihlala zimfusa-pinki, ezinye zimhlophe, zityheli, njl njl. Zihlala zikhula phezulu kwisiqu, ukusuka kwi-axils yeqabunga, umthi omkhulu, iintyatyambo ezininzi zikhona, ezininzi zeentyatyambo ezihlazekileyo zihlanjululwa yi. umoya kunye nezinambuzane. Imbewu yehlazo iyafana ngokumila nembewu yetshilisi, kodwa incinci ngobungakanani, igqunywe liqokobhe elishinyeneyo, isiqhamo ngasinye sehlazo siqhele ukuba nembewu eyi-4 5.
Iifoto zomthi wehlazo
Iingcambu ezihlazekileyo zihlala zineendawo ezirhabaxa, la maqhuqhuva anceda isityalo ukuba simelane nezifo ezithile zokungunda, eziqulathe izilungisi ze nitrogen endosymbiotic.
Iintloni zomthi iimpawu eziphilayo
Isityalo sehlazo sisityalo esincinci esincinci esikhula endle kwiindlela kunye nakumhlaba ovulekileyo. Xa uselula, umthi uyakhula, kodwa wakuba mkhulu, uya kurhubuluza emhlabeni. Iziqu ze-shame zinokufikelela kwi-1.5 m ubude, kunye ne-hook-shaped spines kwi-trunk.
Amagqabi ahlazekileyo anentsiba ephindwe kabini, imiqulu yecala ifakwe njenge-propeller, ukuthintela ngokukhawuleza kuya kuvala ngokuzenzekelayo. Igqabi ngalinye lidla ngokuba namaphecana angama-15 ukuya kwangama-20 kwaye alinasiqu. I-petiole eqhelekileyo yamagqabi esityalo sehlazo idla ngokuba yi-4cm ubude, inoboya.
Intyatyambo nganye iya kukhula ukusuka kwi-axils yamagqabi eneziqu ezinde, iintyatyambo ezingqukuva, ezimfusa ezibomvu. Izityalo ezikhulu ziya kudumba ngakumbi kwaye zisasazwe ngumoya kunye nezinambuzane.
Isiqhamo simalunga ne-2mm ubude, malunga ne-3mm ububanzi, ziqokelelwe zizithungu, embindini wembewu umxinwa, kunye neenwele eziqinileyo emphethweni.
Ukusabalalisa: Isityalo sehlazo sivela eMzantsi Melika nakuMbindi Melika. Ehlabathini, isityalo sikwasasazwa kumazwe athile aseAsia anjengeVietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Jamaica…
Ukusetyenziswa kwesityalo sehlazo
Phantse zonke iindawo zesityalo sokuhlazeka zisetyenziswa ngokubanzi ebomini, ngakumbi njengenye yamayeza anemiphumo emihle kakhulu yempilo. Inefuthe elihle kakhulu kunyango lokuxhuzula, ukunciphisa nokuphelisa ukuxhuzula. I-tonic esebenzayo kunye ne-sedative, impiliso, i-detoxifying, kunye ne-anti-inflammatory effects. Ukongeza, isityalo sinomphumela wokunyanga ngokuqinisekileyo ukuphuthelwa, ukungabikho kokulala, kukunceda ukuba ulale nzulu kwaye ungcono, kukunceda uzive ukhululekile emva kokuvuka. Kubantu abanezifo zamathambo kunye nezifo ezidibeneyo, i-rheumatism, ngakumbi kubantu abadala, ukusetyenziswa rhoqo kwesityalo kuya kunciphisa isifo kakhulu. Inefuthe elihle kumzimba: inceda ukuhlambulula umzimba, ukupholisa phantsi, ukunyanga izifo zendlela yesisu njenge: intlungu yesisu, i-gastritis, ulawulo olungapheliyo. Unceda ukuphilisa amanxeba ngokukhawuleza, ukhulula ngokufanelekileyo intlungu.
Isityalo sehlazo sinesiphumo esihle kakhulu sokuphilisa
Indlela yokutyala kunye nokunyamekela isityalo sehlazo
Kucetyiswa ukuba utyale isityalo kwiindawo ezinezondlo ezininzi, ukufuma okukhanyayo, ukukhanya, ubushushu, kunye nokuhamba kakuhle kwamanzi. Ngokuqhelekileyo, izityalo zehlazo zihlala zikhula zasendle, ngoko umthi kulula ukukhula kunye nokunyamekela.
Indlela yokutyala umthi wehlazo
Isityalo sehlazo sihlala sisasazwa ngokuhlwayela imbewu, okokuqala kuyimfuneko ukukhetha imbewu enomthamo ophezulu wokuntshula (imbewu enkulu, eyomeleleyo, ekhululekile kwi-borers, …). Gxuma imbewu emanzini afudumeleyo malunga ne-25-30 degrees celsius, ngaphakathi kosuku olu-1, uze uzise imbewu ukuze uyihlwayele. Kumhlaba, kufuneka uqale uchumise umhlaba ngesichumiso esiphilayo ukunyusa izondlo emhlabeni. Emva kweentsuku ezili-10-15, imbewu iya kuntshula, kwaye ikhule iingcambu, xa isityalo sikhula ukuya kuthi ga kwi-5-7cm ubude, inokususwa kwi-substrate kwaye ityalwe embizeni okanye ngqo kumhlaba wegadi. Emva kokutyala izithole, khumbula ukunkcenkceshela izityalo ngocoselelo ukuze izityalo zibuyele ngokukhawuleza.
Isityalo sehlazo sisisombululo esisebenzayo kumalungu kunye namathambo
Indlela yokunyamekela isityalo sehlazo
Izityalo ezihlazekileyo ziyakwazi ukumelana nesomiso, kodwa zithinteka kakhulu emanzini, ukubola kweengcambu, ngoko kufuneka kuphela ukunkcenkceshela isityalo rhoqo ngeentsuku ezingama-2-3 zomthi. Ngexesha lemvula, ukunikezelwa kwamanzi kufuneka kumiswe ngokupheleleyo, kwaye endaweni yoko kufuneka kuphathe rhoqo ukukhutshwa kwamanzi ngexesha lomthi.
Rhoqo ngenyanga eyi-1 uqhubela phambili ukuchumisa izityalo ngomgquba obolileyo, ngeentsuku zemvula ungafafaza isichumiso senitrogen esingakumbi kwizityalo.
Imiyalelo yokunyamekela ihlazo lesityalo
Ulawulo lwezinambuzane kwizityalo
Isityalo sehlazo sineempawu ezikhethekileyo, ngoko ke isityalo sehlazo sihlala sixhathisa izinambuzane kunye nezifo, kodwa kufuneka uhlolisise imeko, kunye nokunyamekela kakuhle komthi ukuze ukhule kakuhle.
Ividiyo yomthi wehlazo (intombi) ikhusela amathambo kunye namalungu
Umphumo wokuphilisa wesityalo sehlazo
Ngokutsho kweyeza zaseMpuma, iindawo ezininzi zesityalo sehlazo zisetyenziselwa amayeza. Apho amasetyana kunye namagqabi akrakra, aswiti, abandayo, kwaye anetyhefu kancinane; inefuthe lokukhupha umlilo, ukuthoba, ukukhupha, ukukhupha; Idla ngokusetyenziswa kwezamayeza ukondla ingqondo, ukuzola ingqondo, nokukhupha ityhefu emzimbeni. Ingcambu yehlazo ine-acrid, i-acrid, i-acrid, i-buttery, i-propathi eshushu, ine-toxins, inefuthe le-conceptualing kuphela, i-phlegm yeekhemikhali, umsebenzi, intsebenziswano, i-pepper …
Indlela yokusebenzisa isityalo sehlazo ukunyanga ukulala
Amacandelo esityalo sehlazo anesiphumo sokudakumba kwe-CNS ngokulungelelanisa kunye ne-hexobacbital, i-meprobamate kunye nokwandisa umphumo we-bibactal ukwandisa ukulala ngokuthula. Ukongeza kusetyenziso lokunyanga ukuphuthelwa, isityalo sikwanazo nefuthe lokunciphisa iintlungu, ukuxhuzula, kunye nokukhupha ityhefu. Abantu basebenzisa isityalo njengeyeza lokusela, ngoko ukulala kuya kuba lula, ukulala ngcono, ukuthotywa kunye nokuthuthuzela kwengqondo.
Iyeza le-Herbal liyeza elikhuselekileyo nelidumileyo elisetyenziswa kakhulu kunyango lokungalali ixesha elide. Uxolo lwengqondo, ukuthomalalisa, ubuthongo obunzulu kunye nokulungileyo, landela le ndlela ilandelayo kunye nesityalo sehlazo:
Iyeza 1: Hlamba amasebe omthi, uwanqumle okanye uwanqumle, womise malunga ne-15-20g, ubilise amanzi okusela yonke imihla.
Iyeza lesi-2: Dibanisa i-15g yesityalo esomileyo sehlazo, i-15g yentyatyambo emfusa, i-30g yomhlaba weentyatyambo ezityheli, iziqhamo zothando, ingwane, i-10g yeyeza ngalinye, ubilise konke kwaye usele yonke imihla. Ukugcinwa rhoqo kweveki ye-1 kuya kubona iziphumo ezilungileyo.
Isityalo sehlazo siphatha intlungu yethambo, i-disc ye-herniated
Unyango lweentlungu zangasemva, iintlungu zamalungu, ukuba ndindisholo kwamalungu: Ingasetyenziswa yodwa okanye idityaniswe namanye amachiza ngolu hlobo lulandelayo:
Ingcambu yehlazo (encinciweyo, ixutywe ngotywala, ivumba elimnandi) i-30g ebukhali kunye ne-400ml yamanzi ukuya kwi-100ml, ihlulwe ngamaxesha angama-2 ngosuku.
Iingcambu zehlazo, i-hy-thiem, ameva, ameva, iintlungu zamathambo, ii-millennials, imimoya yokulungisa umhlaba, iindlela zesintu, iintambo, igazi le-millet, i-12g nganye. I-Sac isiselo ngosuku lwe-1 ileli.
Iingcambu zehlazo, iingcambu zepomelo, iingcambu zechrysanthemum, i-20g nganye; Ingcambu ye-ginseng ye-Panax, ingcambu ye-licorice, i-10g nganye. I-Sac isiselo usuku lwe-1 inyanga, inokucwina utywala.
Ukuxhasa unyango kunye nokuthintela ukuphindaphinda kweentlungu zethambo, i-rheumatism, i-rheumatism: Iingcambu ezihlazekileyo kunye neengcambu ze-guava, nganye ukusuka kwi-15-20g eyomileyo, isiselo esihle kakhulu emini. Okanye sebenzisa i-decoction yesityalo kunye namaqabunga e-guise, yongeza ityuwa encinci ukuze udibanise amalungu agulayo malunga nemizuzu engama-20-30 ngelixa amanzi amayeza eshushu.
Ukuhlamba isifo samathambo: Iintloni, amagqabi e-guise, i-40-50g nganye, i-20g yamagqabi e-camphor, i-15g yesinamoni, i-patchouli, i-perilla, i-hydrangea, amagqabi omhlonyane, i-30-40g nganye. Beka yonke into embizeni, yongeza amanzi ukubilisa, de kube iphunga liphuma, ligqume ngelaphu ukuvumela ukuba umphunga ungene kwindawo enesifo, umphunga malunga nemizuzu eyi-10-15 ngosuku. Xa ubila umzimba wonke, yima. Umphunga okanye i-sauna kufuneka yenziwe kanye ngosuku. Ikhosi nganye yeeveki ezi-2, emva koko uthathe ikhefu leveki kwaye wenze enye ikhosi.
Ezinye ezininzi zokusetyenziswa
Ngaphandle koko, unokusebenzisa isityalo esomileyo sokusela ukusela yonke imihla ukunyanga ezinye izifo ezinje:
Unyango lweeshingles: Amagqabi esityalo atyunyuziwe kwaye afakwe kwindawo enesifo. Faka isicelo ngamaxesha angama-2-3 ngosuku. Ngaphambi kokufaka isicelo, hlambulula kwaye womise isilonda ngaphambi kokuba usebenzise iyeza.
I-gastritis engapheliyo: Iingcambu zehlazo zihlambulula umhlaba oyisanti, zinqumle kakuhle, zome. Ixesha ngalinye thabatha i-10-15g decoction ngamanzi okusela emini.
Amayeza onyango lwe-tracheitis engapheliyo: Ingcambu ehlazekileyo i-100g kunye ne-600ml yamanzi ithatha i-100ml, ihlulwe ibe yi-2 iziphuzo emini; Ikhosi nganye yeentsuku ezili-10. Ukuqwalaselwa kweklinikhi kubonisa ukuba i-70% yezigulane ziphiliswa okanye zineenguqu ezintle emva kwekhosi ye-1. Le nqanaba yi-80% emva kweekhosi ezi-2-3, ikhosi nganye i-5-10 iintsuku ngaphandle. Ngexesha lonyango, kufuneka udibane nodokotela wakho malunga nekhosi yonyango.
Amayeza oxinzelelo lwegazi oluphezulu: Isityalo sonke sehlazo, umsipres, iintyatyambo zasendle, idandelion, iiertyisi, amagqabi omthi we-neem, imbewu yenkwenkwezi, isiqu namagqabi ekrene emhlophe, nganye i-6g, i-hathuo, i-parasitic tang 8g nganye; kwaye umhlaba wazala 4g. Isiselo seSac yonke imihla. Ingaba ngumgubo, uqhelise amalungu, uphuze i-20-30g ngosuku.
Ukunyanga isisu esipheleleyo sokucotha kokwetyisa: Amagqabi ahlazekileyo kunye namasebe 16g, ingoma yobuthixo 12g, Bach Thuong 16g, malt 16g. I-Sac yenziwe ngamaxesha e-2, ixesha ngalinye lithatha isitya samanzi amayeza ukusela emva kwesidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa. Sebenzisa iintsuku ezi-3-5.
Unyango lwe-Hemorrhoids: Isandla esi-1 samagqabi amatsha (thatha amagqabi kuphela, susa imithambo kunye ne-spines) kunye ne-1 indebe yewayini emhlophe (ngaphantsi kwe-10 degrees). Amaqabunga anyulu, emva kokuhlanjwa, afakwe epanini ukuze ome aze agalelwe kumhlaba ococekileyo ukupholisa (obizwa ngokuba ngumhlaba ophantsi). Emva koko, lungiselela isitya, uthele iwayini kwaye uphuze konke. Pheka ngobushushu obuphantsi de i-alcohol iphuke, ngeli xesha amanzi akwisitya nawo ajike atyheli. Inkqubo yokupheka i-potion igqityiwe. Xa uthatha, isigulane sahlula ichiza kwiidosi ezi-2 ngosuku. Ikhosi nganye iya kuhlala iintsuku ezi-7, emva kweentsuku ezi-7 ziphelile, ukuba isifo asingcono kakhulu, thatha ikhefu iintsuku ezi-5, emva koko uqhubeke nonyango.
Qaphela xa usebenzisa isityalo sehlazo ukunyanga izifo
Isityalo sasendle ihlazo kulula ukuyifumana, kulula ukuyifumana, ekhoyo ukunyanga izifo, nangona ingenayo imiphumo ekhawulezayo nesebenzayo njengamayeza asentshona, kodwa isebenza ngokucothayo nangempumelelo, kwaye ikhuselekile kwimpilo.
Nangona kunjalo, xa usebenzisa isityalo kunyango, kufuneka kuqatshelwe ukuba unyango lulungile kwaye lusebenza kuphela xa lusetyenziswe kwiidosi ezifanelekileyo, isityalo kufuneka sihlanjwe kakuhle, siqhutywe ngokucocekileyo nangokufanelekileyo. Ukuba isetyenziswe ngokudibanisa namayeza aseNtshona okanye isetyenziswe ixesha elide, ingaba yingozi emzimbeni. Kungcono ukuba nodliwano-ndlebe kunye neengcebiso zoogqirha kunye neengcali xa usebenzisa.
ngasentla, Iphephandaba loKhuthazo lwezoLimo kwabelwane nawe ngolwazi malunga neempawu, ukusetyenziswa, iintsingiselo, kunye nendlela yokutyala kunye nokukhathalela isityalo sehlazo. Siyathemba ukuba inqaku elingasentla liya kukwabelana nawe ngolwazi oluluncedo!
Bật mí cách trồng cây Hồng Môn cực kỳ đơn giản | Hatgiongtihon.net
【Hướng dẫn】 Cách trồng và chăm sóc hoa dừa cạn | Hatgiongtihon.net